Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Iinyani ezinomdla, ezonwabileyo malunga neCaribbean
ICaribbean yindawo yetropiki eyaziwa ngamalwandle anesanti emhlophe, iintsuku ezinde, ubusuku obupholileyo, kunye namathuba okhenketho. Nangona kunjalo, kuninzi ngakumbi kulo mmandla kunezo zinto. Nokuba uceba iholide apho okanye unomdla wokufunda ngakumbi ngeendawo ezahlukeneyo kwihlabathi liphela, nazi iinyani ezinomdla malunga neCaribbean onokuthi ungazazi.
YiNdawo yoKhenketho edumileyo
Ngelixa unokuhamba naphi na kwihlabathi ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa, uya kuba nzima ukufumana umgca wokuhamba ngenqanawa ongenayo iphakheji enye eya kwiCaribbean, eneyona idumileyo. ukuba luhambo lwasempuma lweCaribbean. Kwaneendlela zohambo ezigxile kwezinye iindawo zinokubandakanya amazibuko ambalwa eCaribbean.
Inkulu kunokuba Unokucinga
Ngelixa iUnited States ineendawo zokubamba kunye nemimandla kwiCaribbean, abantu bacinga ukuba yinto ehlukileyo kwaye yangaphandle eUnited States. Nangona kunjalo, iFlorida inokuthathwa njengenxalenye yeCaribbean, okuthetha ukuba naluphi na uhambo olusuka kwizibuko laseFlorida ngokwezobuchwepheshe uhambo lweCaribbean nokuba uyaphi. Oko abantu bacinga ngokuqhelekileyo njengeCaribbean iqulethe ngaphezu kweziqithi ze-7,000 (ezona zingenakuhlala) kunye ne-9% yazo zonke ii-coral reefs emhlabeni. I-Mesoamerican Barrier Reef yeyesibini kuphela kwi-Great Barrier Reef kwi-Pacific ngobukhulu. Ngelishwa, iingqaqa zekorale ehlabathini lonke ziyancipha.
Kukho Iinkcubeko ezininzi zeMveli
Ama-Arawak kunye neeTainos ngamaqela nje amabini aMthonyama azalelwa kwiZiqithi zeCaribbean. La ngamaqela amabini uChristopher Columbus awadibana nawo kuhambo lwakhe lwenkulungwane ye-15 lokufumana indlela emfutshane eya eIndiya esuka eYurophu. Ubomi babantu bomthonyama baba nzima ngakumbi emva kokwenziwa kwamakholoni. Bobabini abantu kunye neenkcubeko zabo basinda ngokulambisa. Nangona kunjalo, zisabalulekile kwizithethe zasekuhlaleni zeziqithi kude kube namhlanje.
Amaxesha Onyaka Ahlukile
Kwizibanzi eziphakamileyo, unyaka wahlulahlulwe wangamaxesha onyaka amane anokuhlukaniswa. KwiCaribbean, apho iqondo lobushushu lingafane lihle libe ngaphantsi kwama-80 degrees, eneneni kukho amaxesha amabini onyaka kuphela, ahlulwa ngamaqondo obushushu kodwa yimvula. Ihlobo liba manzi kakhulu ngelixa ubusika bubalele. Oku kwenza ukuba ilungele abakhenkethi abafuna ukuthatha ikhefu kwingqele kunye nekhephu.
Kukho iiVolcano ezisebenzayo
Ayizizo zonke iziqithi zeCaribbean ezinentaba-mlilo. Nangona kunjalo, phakathi kwezo zikhoyo, kukho i-19 enokuthi iphinde iqhume kwakhona ngexesha elithile, ngokukhawuleza okanye kamva, ibenze baphile. Oko akuthethi ukuba zihlala zigqabhuka, yaye akunakukwazi ukuxela kwangaphambili ukuba ugqabhuko-dubulo luya kwenzeka nini na. Amanye amaziko entaba-mlilo ahlala kwiCaribbean aquka iziqithi zaseSt. Kitts naseNevis, eDominica, eSt. Lucia, eGrenada, eSt. Vincent, naseMartinique. Ezinye iziqithi ezingeyiyo intaba-mlilo kwindawo ekufutshane zisengozini yeetsunami, uthuthu, kunye nezinye iingozi zentaba-mlilo.
Iihagu ZakwaFeral Ziye Zawela Esinye SeziQithi
I-Exuma sisiqithi esingahlali bantu esiyinxalenye yeBahamas. Akuhlali bantu, oko kukuthi, kodwa likhaya leehagu zasendle. Ezi hagu zaziswa kwiCaribbean ngabakholoni baseYurophu, kodwa akucaci ukuba baphelela njani kwesi siqithi. Okucacileyo kukuba bayakuthanda ukuchitha iintsuku zabo ngaselwandle, bequbha emanzini ukuze bahlale bepholile. Kukho abakhenkethi abasa iindwendwe eziqithini ukuze babone iihagu kufutshane. Usenokude ukwazi ukuhamba kunye nabo logama nje umgama ohloniphekileyo.
Yindawo awazalelwa kuyo uRum
Ngokwembali, iCaribbean ibisoloko ingumvelisi omkhulu wommoba, onyibilikayo ukwenza irum. Umoya wotywala uye waba sisiseko sezoqoqosho kulo mmandla ukusukela ngoko, kunye nesiqithi sokuqala esaziwa ngokubuvelisa ngokurhweba ibe yiJamaica.
ICaribbean ngummandla wakudala kunye nokwahlukayo kunye nexesha elidlulileyo elinzima kodwa elinomdla. Ininzi into enokunika abo bakhetha ukutyelela, kwaye nabo bangenako banokuzuza ngokufunda ngakumbi ngayo.
Novemba 6, 2021 kwi-14: 38
I-Exuma yityathanga leziqithi ezingama-365 ezibizwa ngokuba ziicay ENGAHLALI, enyanisweni kukho into phakathi kwama-7000 ukuya kuma-8000 abantu abahlala ikakhulu kwisiqithi esikhulu, i-Great Exuma, nakwezinye iziqithi zekhonkco….
Iingulube zibekwe kwisiqithi esilahliwe ngaphambi kwe-2000 NYE xa bonke abantu babekholelwa ukuba ihlabathi liza kuphela kwaye babegcina ukutya ngaloo ndlela. Oomatiloshe bamise kwelo chweba emva koko baqala ukuthatha imifanekiso yezi hagu kwaye ilizwi lasasazwa kwilizwe lezokhenketho kwaye baba ngumtsalane… ..